ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပါသလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရှုပ်ပွနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကြောင့် စိတ်ညစ်နေရပါသလား?
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင့်။ Beauties တို့ထဲမှာ ရှုပ်ပွတဲ့ဆံနွယ် ဒါမှမဟုတ် အဆီများပြီး ခဲနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူ ရှိပါသလား? ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ သတင်းကောင်းလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်နော်။
Smooth Renew Anti-frizz cream လေးဟာဆိုရင် အလုပ်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊ ကျန်းမာရေးကြောင့်ဖြစ်စေ ခေါင်းမလျော်ဖြစ်သေးလို့ ဆံသားဖွာပြီး ငြိနေခြင်းများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ Gym မှာနေ့တိုင်းကစားပြီး ချွေးထွက်များလွန်းတာကြောင့် ထွက်ပေါ်လာတဲ့ အနံ့နဲ့ စီးထိုင်းခြင်းများကို တခဏချင်း စတိုင်ကျသန့်ရှင်းစေမှာပါ။
ရေအသုံးပြုစရာမလိုပဲ တောက်ပြောင်ချောမွေ့ပြီး နူးညံ့မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ Cream အမျိုးအစားဖြစ်ပေမဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ စေးထိုင်းခြင်းမျိုးမဖြစ်စေပါဘူး။
ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံသားအလည်မှ အဖျားထိတိုင် Cream အနည်းငယ်ကို ယူပြီး လိုအပ်သလို ပုံသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ဆံသားကြမ်းနေလို့ အသုံးပြုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ပမာဏအနည်းငယ်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် လုံလောက်ပါတယ်။ ဆံသားကို ပျက်စီးမှုနည်းပြီး ပုံသွင်းလိုတယ်ဆိုရင်တော့ Cream များများအသုံးပြုသင့်ပြီး Dryer အသုံးပြုကာ လိုသလို ပုံဖော်နိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ ဆံသားဟာ သိသိသာသာ ချောမွေ့လာပြီး အဆီပြန်ခြင်းကင်းဝေးတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါ။ ဒါအပြင် ဆံသားတွေဟာ သန်စွမ်းတောက်ပြောင်နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဆံပင်ဖြီးရခက်နေသူတွေ၊ အဆီအရမ်းပြန်တတ်တဲ့ ဦးရေပြားပိုင်ဆိုင်သူတွေအနေနဲ့ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ဈေးနှုန်းအားဖြင့် 5$ လောက်ပဲကျသင့်မှာပါနော်။
Valentine day မှာ ချောကလက်တွေအစား Cosmetic တွေ လက်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့...